जापानले बनायो स्क्रिनमै चाटेर खानेकुराको स्वाद लिन सकिने टिभी – Eps Sathi
December 25, 2021 438
अब टिभिमा विभिन्न कुकिङ च्यानलमा मिठा मिठा खानेकुरा हेर्दै यसको स्वाद कस्तो होला? खान पाए पनि हुने? भन्दै थुक निल्दै बस्ने दिन गएको छ। अब टिभीको स्क्रिनमै चाटेर उक्त खानेकुराको स्वाद लिन मिल्ने टिभी जापानले बनाएको छ। यस्तो किसिमको टिभी जापानका एक प्रोफेसरले विकास गरेका हुन।
जापानी प्रोफेसरले यस किसिमको सुविधा भएको टिभीको प्रोटोटाइपको विकास गरेका हुन। यसको व्यवसायिक रुपमा उत्पादन भने भइसकेको छैन। चाट्न मिल्ने टिभी अर्थान स्क्रिन चाटेर खानेकुराको स्वाद लिन सकिने यस किसिमको टिभीले खानेकुराका विभिन्न स्वादहरु दिने गर्दछ। यस्तो टिभिमा स्क्रिनमा देखिने खानेकुराको स्वाद लिनका लागि टिभि स्क्रिन चाटे मात्रै पुग्दछ।
यस किसिमको प्रोटोटाइप टिभिको नाम ‘टिटिटिभी’ अर्थात ‘टेष्ट द टिभी’ दिइएको छ। यसमा १० किसिमका भिन्न भिन्न स्वाद भएका कन्सिस्टरहरु जडान गरिएका छन जसले स्क्रिनमा देखिएको खानेकुराको स्वाद दिने गर्दछन। तिनै १० वटा स्वाद कन्टेनरहरुबाटै विभिन्न मात्रामा स्वादहरु मिक्स भएर खानेकुराको नयाँ स्वाद बन्ने गर्दछ।
“यस किसिमको टिभि बनाउनुको उदेश्य मानिसहरुलाई आफ्नै घरभित्र बसेर रेष्टुरेन्टमै गएर खाएको जस्तै अथवा विश्वको कुनै पनि ठाउँमा गएर खाएको जस्तै अनुभव लिन सकिने बनाउनु हो।” मेइजी युनिभरसिटीका प्रोफेसर होमेइ मियाशिटाले अन्तराष्ट्रिय सन्चार संस्था रेउटर्सलाई बताएका छन। यो टिभिले गित संगित सुनेजस्तै, टिभी मुभि हेरेजस्नै खानेकुराको पनि आनन्द लिन सक्ने बनाउने उनले बताएका छन।
मेइजी युनिभर्सिटीका एक २२ बर्षिय विध्यार्थी युकी होउले यस टिभीको प्रदर्शन गरेकी थिइन। प्रदर्शनमा उनले टिभीलाई आफू मिठो चकलेटको स्वाद लिन चाहेको बताइन। तब टिभी स्क्रिनमा चकलेटको स्वाद निस्कियो। उनले त्यसको स्वाद लिइन। “यो एक किसिमको मिल्क चकलेट रहेछ।” टिभी स्क्रिन चाटेर स्वाद लिइसकेपछि उनले प्रतिकृया दिइन। “यो चकलेटको सस जस्तै मिठो रहेछ।” उनले भनिन। प्रोफेसर मियाशिटाले आफूले यो टिभीको प्रोटोटाइप गत १ बर्षदेखि बनाइरहेको बताए। उनका अनुसार यदि यसको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने हो भने यसको लागत प्रतिगोटो ८ सय ७५ डलर सम्म लाग्न सक्दछ।
Prevकोरिया सरकारले जारी गर्यो यो बर्षकै पहिलो चेतावनी, सुरक्षित रहन सबैलाई सरकारको आग्रह
Nextकोरियाका मजदूरबाट करोडौं उठाएको सानो मिल्ति हाइड्रोमा हिनामिना, मजदूरको पसिना पानीमा मिल्यो